Nepal: Maresaka ny fianihana ny Tendrombohitra Everest · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jolay 2018 3:00 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, 繁體中文, Ελληνικά, English
(Marihina fa tamin'ny 26 May 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tonga ny vanim-potoan'ny fiakarana tendrombohitra. Nepal, amin'ny maha firenena manana ny Tendrombohitra Everest azy, ilay avo indrindra eran'izao tontolo izao, no mientanentana amin'ny vaovao momba izany. Nisy ny zavabita tsara indrindra vitsivitsy voarakitra . Mpihanika maherin'ny 500 no efa tonga teny amin'ny tampon'ny tendrombohitra Everest, ary dimy no maty nandritra ny andrana, kanefa tsy nihena ny fikasana ny fianihana ny tendrombohitra .
Manan-kolazaina vitsivitsy momba ny fiakarana ny Everest ny tontolon'ny bilaogy Nepaley. Gaga tamin'ny fomba fiakaran'ny Sherpas mora foana izany tendrombohitra izany ny bilaogera vitsivitsy sy ny nanampiany ny hafa mba ho tonga eny an-tampony kanefa tsy mba nahazo fankasitrahana mendrika azy izy ireo.
Gaga ny Nepal Sites fa tena mora ho an'ny Sherpas ny nanao izany, “… misy ny olona tahaka an'i Appa Sherpa, izay nianika ny Everest in-17 ary tahaka ny mihinana sombi-mofo ho azy ny fiakarana ny tendron'izao tontolo izao .” Ary, nanoratra ny The Radiant Star hoe “in-17 i Apa Sherpa no tonga teny an-tendrony, ary i Pemba Sherpa dia in-telo no tonga teny tao anatin'ny sivy andro tamin'ity vanim-potoana ity, ary maro ny Sherpas izay niakatra teny an-tendrony nihoatra ny in-dimy .”
Saingy samy mihevitra ireo bilaogy roa ireo fa mihemotra ireo Nepaley rehefa misy ny fanomezana fankasitrahana. Mihevitra i The Radiant Star fa tsy rariny izany :
Kanefa, tsy nahazo ny fankasitrahana izay mendrika azy ny Sherpas.
Tamin'ny horonantsary rehetra izay natao, dia saika tsy tazana ny Sherpas raha vao mandao ny toerana hiaingana ireo mpihanika tendrombohitra. Ao anatin'ny fanadihadiana rehetra, mikarakara sakafo sy mitondra entana no andraikitry ny Sherpa.
Nanontany tena ny Nepal Sites hoe nahoana no tsy misy sarimihetsika sy boky avy amin'ireo mpihanika tendrombohitra Nepali:
Nanontany tena ihany koa aho amin'ny fanehoan'ny mpianika vahiny amin'ny fomba tena mahafinaritra ny tantara sy ny maherifon'ny mpihanika an'i Everest. Toa tsy milaza ny tantarany ireo Nepaley na dia niakatra ny tendrony mihoatra ny an'ny hafa aza Ary na ireo mpanao gazety aza dia toa tsy taitra amin'ny fitantarana ny tantaran'izy ireo.
Look & Gaze talks about an expedition to be led by the Snow Leopard – 60-year-old Ang Rita Sherpa which aims to hoist the flags of eight political parties of Nepal atop Mt Everest. It says the Democratic Everest Expedition is important event of Nepal:
Niresaka momba ny dia notarihan'i Snow Leopard ny Look & Gaze- Ang Rita Sherpa 60 taona izay nikendry ny hanofahofa ny sainan'ny antoko politika miisa valo tao Nepal teny an-tampon'i Tendrombohitra Everest. Nilaza izy fa hetsika nanan-danja tao Nepal ny Dia Demokratika nankany Everest :
Tena andro niavaka ho an'i Nepal ‘Vaovao’ demokratika ny dia mendrika nataon'ny lehilahin-dranomandry, na dia toy ny hetsika modernista taty aoriana aza izany amin'ny fametrahana saina eny an-tendrombohitra avo indrindra. Tena nanan-danja ara-tantara ny fientanentanan'ireo lehilahin-dranomandry Midika ny fanimbàna ny fitantarana an'i Everest, ny fitantarana lehibe tamin'ny vanim-potoanan'ny Fanjakana Britanika sy ny vanim-potoana feodaly Nepaley ny firohotana nankany an-tampon-tendrombohitra niaraka tamin'ireo saina izay nentin'izy ireo. Hitondra hevi-baovao ho an'ny tantara ity “Dia Demokratika nankany Everest ” ity.
Ary, manana fitantarana vaovao momba ny dia hanadiovana ny Tendrombohitra Everest i Real News Stories avy any Nepal.